The laser marking igwe na ọtụtụ-eji, na ngwaahịa njirimara nke niile n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ nwere ike ihu ọma-enwe afọ ojuju. The eriri laser marking igwe, na carbon dioxide laser marking igwe, na ultraviolet laser marking igwe, ihe a kapịrị ọnụ ga-eji na-ahụ ngwaahịa ihe, na-akanye ọdịnaya Na mmetụta chọrọ. Ọ dịtụ mfe iji, ọ ga-abụ obere ọzụzụ.
6090 CNC osise Machine
Usoro MK6090 nwere ọrụ siri ike na arụmọrụ dị mma, dị mfe iji, sie ike ma dịgide. A na-etinye ya n'ọtụtụ ebe na mgbasa ozi, acrylic, brass, Wood, Plastic, Aluminium, Di-Bond, Board Board, Fomex. Injinia plastik, marble, acrylic, perspex, PVC, panel mejupụtara, Copper, Alloys, MDF, wdg.